5 फाइब्रोमाइल्जियाका साथ गतिशीलता बढाउनको लागि आन्दोलन अभ्यास
5 फाइब्रोम्यालगियाका लागि आन्दोलन अभ्यास
14 / 02 / 2019 /0 टिप्पणीहरू/i Fibromyalgia, व्यायाम र व्यायाम, rheumatism/av भोंड्ट
फिब्रोमायाल्जिया एक लामो समयसम्म दुखाइ निदान हो जुन मांसपेशिहरु र जोर्नीहरूमा कडाई र दुखाइ द्वारा दर्शाईन्छ। यहाँ पाँच आन्दोलन अभ्यासहरू छन् (VIDEO सहित) फाइब्रोमायाल्जियाका साथ ती पछाडि र घाँटीमा राम्रो आन्दोलन प्रदान गर्न सक्ने।
सुझाव: फाइब्रोमायाल्जियाको साथ तपाईको लागि अनुकूलित आन्दोलन अभ्यासको साथ व्यायाम भिडियो हेर्न तल स्क्रोल गर्नुहोस्।
फाइब्रोमायाल्जियाको कारण मांसपेशिहरु, संयोजी ऊतक र शरीरको जोर्नीहरूमा पुरानो पीडा हुन्छ। पुरानो पीडा निदान एक कोमल ऊतक संधिवात को रूप मा परिभाषित छ र प्रभावित व्यक्ति गम्भीर पीडा को एपिसोड दिन्छ, बिरामी गतिशीलता, थकान, मस्तिष्क कुहिरो (फाइब्रोटिक फग) र निद्रा समस्याहरू।
यस्तो पुरानो दुखाइका साथ बस्न कडा कसरत दिनचर्याहरू प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ - र यसैले दैनिक जीवन कम आन्दोलन द्वारा विशेषता हुन सक्छ। त्यसकारण आन्दोलन अभ्यासहरू बारे जान्न यति महत्त्वपूर्ण छ कि तलको भिडियो र यस लेखमा देखाइएको जस्तो। हामी साँच्चिकै आशा गर्दछौं कि उनीहरूले तपाईंको पछाडि आन्दोलनमा मद्दत गर्न सक्छन्।
हामी दुबै पुरानो पीडा निदान र गठिया भएकाहरूलाई उपचार र जाँचको लागि राम्रो अवसरको लागि स fight्घर्ष गर्दछौं - सबै कुरा सहमत छैन दुर्भाग्यवश. हाम्रो FB पृष्ठमा हामीलाई मनपराउनुहोस् og हाम्रो YouTube च्यानल सामाजिक मिडियामा हामीसँग हजारौं व्यक्तिको दैनिक जीवनको सुधारको लागि लड्न सामेल हुन।
यस लेखले तपाइँलाई फाइब्रोमाइल्जिया भएकाहरूको लागि पाँच कोमल व्यायाम अभ्यास देखाउँनेछ - जुन दैनिक रूपमा सुरक्षित रूपमा गर्न सकिन्छ। यस लेखमा थप तल, तपाइँ अन्य पाठकहरूको टिप्पणीहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, र साथसाथै आन्दोलन अभ्यासको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ हामी यस लेखमा हामीले हेर्ने पाँच आन्दोलन अभ्यासको भिडियो आफै देख्न सक्छौं। तपाईं तलको चरण १ देखि in मा अभ्यास कसरी गर्ने विस्तृत विवरण पढ्न सक्नुहुन्छ।
सुझाव: फाइब्रोमाइल्जियाका धेरै व्यक्ति व्यायाम ब्यान्डहरू प्रयोग गर्न धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ (जस्तै disse तल देखाइएको छ वा मिनीब्यान्ड) तिनीहरूको प्रशिक्षणमा। यो किनभने यसले राम्रो र नियन्त्रणित आन्दोलनहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
यहाँ तपाई बिभिन्नको संग्रह देख्नुहुन्छ प्रशिक्षण ट्राम (लिंक नयाँ विन्डोमा खुल्दछ) जुन फाइब्रोमायाल्जियाको साथ तपाईंको लागि राम्रो हुन सक्छ वा तपाईंको पीडा अवस्थाको कारण सामान्य व्यायाम गाह्रो लाग्ने।
१. ल्याण्डस्केप हिप रोटेशन
यो सुरक्षित व्यायाम सबैको लागि उपयुक्त छ। व्यायाम तल्लो पछाडि, हिप्स र श्रोणिलाई निरन्तर राख्नको लागि एक राम्रो र कोमल तरीका हो।
यो व्यायाम दैनिक गरेर तपाइँले टेन्डन र लिगामेन्टको अधिक लोचलाई पनि योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। आन्दोलन को व्यायाम पनि संयुक्त तरल पदार्थ को अधिक आदान प्रदान को उत्तेजित गर्न सक्छ - जो यस प्रकार "लुब्रिकेट" जोड़हरु लाई मद्दत गर्दछ। हिप रोटेशन झुट बोल्ने एक दिन धेरै पटक प्रदर्शन गर्न सकिन्छ - र विशेष गरी दिनहरुमा जब तपाइँ पछाडि र श्रोणि मा कठोरता संग उठ्नुहुन्छ।
नरम सतहमा तपाईंको पछाडि झुप्पनुहोस्।
बिस्तारै आफ्नो खुट्टा तपाईं तिर तान्नुहोस्।
खुट्टा एकसाथ समात्नुहोस् र बिस्तारै तिनीहरूलाई छेउबाट अर्को साइड ड्रप गर्नुहोस्।
सुरूवात स्थितिमा फर्कनुहोस्।
प्रत्येक पक्षमा व्यायाम -5-१० पटक दोहोर्याउनुहोस्।
2. बिरालो ("बिरालो-ऊँट" को रूपमा पनि जानिन्छ)
यो एक प्रसिद्ध योग व्यायाम हो। व्यायामले बिरालोबाट यसको नाम पाउँदछ जसले अक्सर आफ्नो मेरुदण्डलाई लचिलो र मोबाइल राख्नको लागि छत बिरुद्द पछाडि गोली हान्दछ। यो व्यायाम तपाईं काँध ब्लेड र तल्लो फिर्ता बीच पछाडिको क्षेत्र नरम गर्न मद्दत गर्न सक्षम हुनेछ।
एक प्रशिक्षण म्याट मा सबै चौका मा खडा सुरु।
ढिलो गतिमा छतको बिरूद्ध तपाईंको पछाडि गोली हान्नुहोस्। -5-१० सेकेन्डका लागि होल्ड गर्नुहोस्।
त्यसोभए तल तपाईंको पछाडि तल तल्लो तर्फ गर्नुहोस्।
कोमलता संग आन्दोलन प्रदर्शन गर्नुहोस्।
व्यायाम -5--10 पटक दोहोर्याउनुहोस्।
धेरै व्यक्तिहरू पुरानो पीडाले ग्रस्त छन् जसले दैनिक जीवनलाई नष्ट गर्दछ - यसैले हामी तपाईंलाई प्रोत्साहित गर्दछौं सामाजिक मिडियामा यो लेख साझा गर्नुहोस्, हाम्रो फेसबुक पेज मन नहिचकिचाउनुहोस् र भन्नुहोस्: "हो, लामो दुखा निदानको बारेमा थप अनुसन्धान गर्न"। यस तरिकाले, व्यक्तिले यस निदानसँग सम्बन्धित लक्षणहरूलाई थप देख्न सक्ने बनाउन र अधिक व्यक्तिहरूलाई गम्भीरताका साथ लिने सुनिश्चित गर्न सकिन्छ - र यसरी उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्।
हामी यो पनि आशा गर्दछौं कि यस्तो बढाइएको ध्यानले नयाँ आकलन र उपचार विधिहरूमा अनुसन्धानका लागि बढी रकम प्राप्त गर्न सक्छ।
Che. छाती तर्फ घुँडा
यो व्यायाम विशेष गरी राम्रो गरीन्छ तपाईको हिप्स जुटाउनका लागि। अधिक लचिलो र चल हिप्स पनि तपाईंको पेल्विक समारोह र तपाईंको पछाडि गति मा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
धेरै व्यक्ति हिप गतिशीलता वास्तवमै कत्तिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर कम अनुमान लगाउँछन्। के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि कडा हिप्सले तपाईंको सम्पूर्ण चाल परिवर्तन गर्न सक्दछ? यदि तपाईंको चाल नकारात्मक रूपमा परिवर्तन गरिएको छ भने यसले पछाडि कडाई र श्रोणि समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ।
किनकि यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि यो दैनिक जीवनको आन्दोलन र क्रियाकलाप हो जसले घाउको मांसपेशिहरु, कण्डरा र कडा जोड़हरूलाई रक्त संचार बढाउँदछ। पौष्टिक तत्वहरू जुन तनावका मांसपेशीहरू र काम नलाग्ने जोडहरूको मर्मत र मर्मतका लागि निर्माण सामग्रीको रूपमा काम गर्दछन् रगत प्रवाहमा पनि ढुवानी गरिन्छ।
एक प्रशिक्षण म्याट मा आफ्नो पीठ मा झूट।
तपाईको छाती बिरुद्द एक खुट्टा तान्नुहोस् र तपाईको खुट्टालाई तपाईको खुट्टामा गुणाउनुहोस्।
-5-१० सेकेन्डका लागि स्थिति होल्ड गर्नुहोस्।
ध्यानपूर्वक खुट्टा कम र फेरि अर्को खुट्टा माथि उठाउनुहोस्।
व्यायाम प्रत्येक छेउमा १० पटक दोहोर्याउनुहोस्।
हामी विशेष गरी रुमेटिक्स र पुरानो पीडा बिरामीहरूको व्यायामको रूपमा एक तातो पानी पोखरीमा प्रशिक्षणको शौक राख्छौं। तातो पानी मा यो कोमल व्यायाम अक्सर यो बिरामी समूह को व्यायाम मा भाग लिन को लागी सजिलो बनाउँछ।
Side. साइड असरमा फिर्ता मोबिलाइजेशन
फाइब्रोमाइल्जिया भएकालाई प्राय: पछाडि र श्रोणि क्षेत्रमा दुखाइ हुन्छ। वास्तवमा किन यो व्यायाम पछाडि मांसपेशी गाँठहरू माथि छाड्न र बढ्दो पछाडि आन्दोलनमा उत्तेजकको लागि महत्वपूर्ण छ।
अर्कोमा माथिल्लो खुट्टाको साथ प्रशिक्षण म्याटको छेउमा झुण्डनुहोस्।
आफ्नो हातहरू तपाइँको अगाडि फैलाउनु पर्छ।
त्यसो भए तपाईको बाहुको घेरा पछाडि पछाडि पछाडि चल्नुहोस् - ताकि तपाईको पछाडि घुम्न सकोस्।
व्यायाम दिनमा धेरै पटक दोहोर्याउन सकिन्छ।
Back. पछाडि विस्तार (कोब्रा)
पाँचौं र अन्तिम व्यायामलाई कोब्रा पनि भनिन्छ - कोब्रा सर्पको कारणले गर्दा यसलाई विस्तार गर्न र अग्लो हुन सक्ने क्षमतामा खतरा छ भने। व्यायामले कम ब्याक र पेल्विसमा बढ्दो सर्कुलेशनलाई उत्तेजित गर्दछ।
एक प्रशिक्षण म्याट मा आफ्नो पेट मा झूट।
हतियार समर्थन र बिस्तारै बिभिन्न देखि माथिल्लो शरीर उठाउनुहोस्।
करीव १० सेकेन्डको लागि स्थिति समात्नुहोस्।
ध्यानपूर्वक फेरि चटाईमा तल झार्नुहोस्।
व्यायाम बिस्तारै गर्न याद गर्नुहोस्।
व्यायाम -5-१० दोहोर्याउनुहोस्।
लामो पीडाको साथ धेरै व्यक्ति हड्डी र घुँडामा अस्थिरिया (ओस्टियोआर्थराइटिस) बाट पनि प्रभावित हुन्छन्। तलको लेखमा तपाई घुँडाको अस्थिरोगको विभिन्न चरणहरू र कसरी अवस्थाको विकास हुन्छ भन्ने बारे थप पढ्न सक्नुहुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: - घुँडा ओस्टियोआर्थराइटिसको St चरणहरू
तलको भिडियोले हिप्सको ओस्टियोआर्थराइटिसको अभ्यासको उदाहरण देखाउँदछ। तपाईमले देख्न सक्नुहुन्छ, यी अभ्यासहरू कोमल र कोमल पनि छन्।
भिडियो: the हिपमा ओस्टियोआर्थराइटिस बिरूद्ध व्यायाम (भिडियो सुरू गर्न तल क्लिक गर्नुहोस्)
फेसबुक समूहमा शामिल हुनुहोस् «संधिवात र दीर्घकालीन पीडा - नर्वे: अनुसन्धान र समाचारHe (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) अनुसन्धान र मिडिया लेखन को बारे मा नवीनतम अपडेट को लागी rheumatic र जीर्ण विकार को बारे मा। यहाँ, सदस्यहरूले पनि मद्दत र समर्थन लिन सक्दछन् - दिनको सबै समयमा - आफ्नै अनुभव र सल्लाहको आदानप्रदानको माध्यमबाट।
थप साझेदारी गर्न यो बटन ट्याप गर्नुहोस्। एउटा ठूलो सबैलाई धन्यवाद छ जसले पुरानो दुखाई निदानको बृद्ध समझ बढाउन मद्दत गर्दछ!
अर्को पृष्ठ: - यो तपाईको हातमा Osteoarthritis को बारे मा थाहा पाउनु पर्छ
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fem-bevegelighetsøvelser-for-de-med-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 भोंड्ट https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 भोंड्ट2019-02-14 18:43:102021-03-24 13:26:235 फाइब्रोम्यालगियाका लागि आन्दोलन अभ्यास
Low कम चयापचयको प्रारम्भिक लक्षण6काँधको महत्वपूर्ण ओस्टियोआर्थराइटिसको बिरूद्ध व्यायाम